बालगायक दर्जी नयाँ घरमा, यस्ता छन विशेषता! - Everest Dainik - News from Nepal
बालगायक दर्जी नयाँ घरमा, यस्ता छन विशेषता!
काठमाडौं, भदौ १६ । यूट्युब ट्रेन्डिङमा परिरहने बालगायक अशोक दर्जी दमकस्थित नयाँ घरमा सरेका छन् । नयाँ घरमा सरेपछि उनी थप चर्चित बनेका छन् ।
टहरोमा बस्दै आएको दर्जीको परिवारलाई हास्य अभिनेता हरिवंश आचार्यले नयाँ घरको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । दर्जीको घर मात्र नयाँ छैन, घरभित्रका सम्पूर्ण फर्निचर नयाँ थिए ।
याे पनि पढ्नुस बाटो र होटलमा गीत गाउँदै खर्च जुटाउने बालक दर्जीले गरे पहिलो गीत रेकर्डिङ
बैठक कोठमा ४३ इन्चको टिभी सेट मात्र होइन होम थिएटर नै छ । सोफा, दराज, टि–टेबल, पलङ, डाइनिङ टेबल, फ्रिज, राइस कुकुरदेखि ग्यास चुलोसम्म नयाँ छन् ।
चार कोठाको उक्त घर निर्माण तथा फर्निचर खरिदमा २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको संगीतकार टंक बुढाथोकीले बताएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस अशोक दर्जीको चौरीको चाम्रोले अपार सफलतापछि घर छायो खुशीयाली (भिडियोसहित)
ट्याग्स: Ashok Darji, Haribansh Acharya, jhapa damak